आजका समाचार सार : कागको सम्मेलन्, फोहोरमा ग्यास र सांसदले पुराना गाडि नचढ्ने…… « Gajureal
आजका समाचार सार : कागको सम्मेलन्, फोहोरमा ग्यास र सांसदले पुराना गाडि नचढ्ने……
प्रकाशित मिति: १९ कार्तिक २०७५, सोमबार १५:३३
आज यमपञ्चक सुरु भएको दिन कागको पूजा गरी काग तिहार मनाउने गरिन्छ । काग तिहारको अवसर पारेर आज रत्नपार्कमा काग सम्मलेन संपन्न भएको छ । राष्ट्रिय संगीतकर्मी संघले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा इलामका रमेश दुलाल ‘कागे’ले काग झै दुरुस्त स्वर निकालेर कागको बथानै बोलाएका थिए । दुलाल काग बाहेक मुखैले मादल, साऱगी, सनाई लगायतका बाध्य सामग्री र बिभिन्न चरा चुरुङ्गीको आवाज समेत निकाल्दछन् । पँहुच हुनेलाई दोहोरो, तेहेरो सुबिधा दिन सक्ने सरकार र नेतृत्वले यस्ता बिलक्षण प्रतिभाको सम्मानमा केहि गरे हुने तर यस बारे सोच्ने फुर्सद कस्लाई छ र !
फोहोरबाट ग्यास निकाल्ने प्रबिधि काठ्माण्डौमा भित्रिएको छ । काठ्माण्डौ शंखमुलका केशव घिमिरोको घरमा जडित ईजरायली प्रबिधिको ‘होम बायोग्यास’ नामको बायो प्लान्ट ‘कामनपाका’ मेयर बिद्या सुन्दर शाक्यले उदघाटन गरेका छन । भान्छाबाट निस्कने फोहोरबाटै उक्त प्लान्ट सजिलै चल्ने कुरा घिमिरेले बताए ।
यो समाचार सुन्नमा राम्रो, उत्सुकता बढाउँने भए पनि यसको लागत कति, टिकाउ कति र कतै कसैले क्षणिक नाफा कमाउन सस्तो प्रचार त गरेको हैन ? यस्ता धेरै प्रशनको उत्तर पहिले सरकारी स्तरबाट नखोजिने हो भने ब्यापारी मोटाउँने र उपभोक्ता दुब्लाउने मात्र हुने गजुरियल बिश्लेषण रहेको छ ।
संघीय संसदका बिभिन्न समितीका सभापतिको रहरका कारण पुराना गाडिहरु हुँदा हुँदै सरकारले नयाँ २३ वटा गाडि किन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाएको खवर सेतोपाटीले लेखेको छ ।मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भने झै , कुरा जनता र राष्ट्रको गर्ने काम निजी स्वार्थमा नै निर्लिप्त हाम्रा नेताहरुबाट जनताले अव के अपेक्षा गर्ने ?